Fampiofanana Hazakazaka Haingana dia Haingana Momba Ny Lahatsary Misokatra · Global Voices teny Malagasy
Fampiofanana Hazakazaka Haingana dia Haingana Momba Ny Lahatsary Misokatra	Voadika ny 07 Febroary 2013 15:21 GMT
Zarao: Vao avy namoaka fampianarana haingana momba ny famoronana lahatsary misokatra ny oniversite “tsiroaroa” P2PU (Peer to Peer University) noho ny fangatahan'ireo olona mpikirakira, mpamoaka sy mpampiasa lahatsary. Tao anatin'ny hetsika Forum Open Video, natao tamin'ny volana Desambra 2012 tao amin'ny xm.lab no nananganana izany fampiofanana izany.
Lohahevitra isan-karazany toy ny refin-dahatsary, fanaovana kaody, fametrahana lohateny kely, ny fandalovan'ny lahatsary ao amin'ny habaka, ny lahatsary sy ny HTML ary ny fandikana an-teny miafina, mikasika ny angona no hita amin'ity fampiofanana maimai-poana sy antserasera izay maharitra eo amin'ny 15 ora ity.
Natokana indrindra ho an'ireo mpianatra informatika te-ahafantatra bebe kokoa momba ny lahatsary ity fampiofanana ity, ary mety ho an'ireo mpanangana rindrambaiko te hanatsara ny asam-pamoronana lahatsary ihany koa. Ahafahana manatanteraka boky fianarana momba ny lahatsary misokatra ihany koa ny tetikasa, aingam-panahy avy amin'ny filàn'ny Tetikasa Mokolo Lab. Nomena ny anaran'ny tsena an-kalamanjana lehibe indrindra ao Yaoundé ny tetikasa, izay mikendry ny hampiditra ireo vaovao azo trandrahana ho ao anatin'ny fahaiza-momorona horonan-tsarimihetsika afrikanina, mba ahafahana mahafatantra sy mahita tsara ireo mpamorona sy ny zava-noforonin'izy ireo ao Afrika sy ny any am-pielezana (diaspora) isan-karazany. Mametraka sehatra antserasera mikendry ny fitsinjarana ireo vaovao izany ankehitriny ary hametraka izany an-tambajotra amin'ny alalan'ny vavahadin-tserasera mora ampiasaina.
Nampiasa fomba antsoina hoe fampiofanana hazakazaka haingana dia haingana “course sprint” ireo mpanangana ny tetikasa P2PU Open Video izay natao hamolavolana ny fampiofanana amin'ny aterineto mandritra ny herinandro iray. Aingam-panahy avy amin'ny hevi-baovao antsoina hoe “book sprint” izany fomba fampiofanana izany, izay natsangan'i Floss Manuals tany am-boalohany, tetikasa natao hamoriana ireo vondrona mpitondra hevi-baovao ao anaty efitra, mandritra ny ora fiasana voafetra, ary ny fanatratrarana vokatra miendrika boky na boky fampianarana no tanjona tamin'izany. Amin'ny tetikasa ankehitriny, mikendry ny hanangana fampiofanana an-tserasera ny tetikasa.
Mandritra izany fampiofanana haingana dia haingana izany, Mick Fuzz, mpamorona ny tetikasa, namoaka lahatsoratra izay nilazany ny fomba fandehan'ny hazakaza-piofanana. Ny finoany dia “ny ahazoan'ireo vondrona mpampiofana an-tserasera tombontsoa izay maniry ny hamorona [fampitaovana na] loharanom-pampianarana misokatra (open education resources, na OER) amin'ity fomba fampiofanana ity. “Notohizany tao amin'ny bilaogin'ny universite P2PU ny lahatsorany:
Mandritra ny fampiofanana fizarana voalohany, nandinika ny rakitsoratry (fichiers) ny lahatsary izahay mba hijery ny olana momba ny fanaovana kaody sy ny votoaty. Avy eo nifototra tamin'ny famoronana rakitsoratry ny lahatsary misokatra ary niezaka nahafantatra ny fomba famoronana lohateny kely amin'ny fomba malalaka sy mora idirana izahay. Ny fizarana faharoa kosa dia nahafahanay nandalina ny fampiasana ireo lahatsary mivantana amin'ny habaka (aterineto). Fomba iray nifankahazarana tamin'ireo tahiry (metadonnées) izany tamin'ny alalan'ny fikirakirana ny lahatsary antserasera baikon-davitra sy ny sary Datamoshing, izay fomba mihoatra ny zava-misy saingy mahafinaritra ny mahafantatra ny fomba fiasan'ny lahatsary nomerika…
Hitanao ao amin'ny bilaogy P2PU ireo vaovao fanampiny momba ny fizotry ny famoronana sy ireo asa manokana noresahana nandritra ny hazakaza-pampiofanana.
Na dia izany aza, mandrisika ny P2PU ny hanomezana azy tatitra sy ny vokatry ny fampiofanana momba ny lahatsary misokatra. Azo jerena amin'ny endrika PDF ihany koa ny fampiofanana.
Ahitana fampiofanana maro isan-karazany karakaraina ao anatin'ny tetikasa School of Open ao amin'ny oniversiten'ny P2PU. Ohatra amin'izany: Ahoana ny fomba hanoratana ireo votoaty Wikipedia ho zahana, Ahoana ny fomba ahitana sary tonga lafatra amin'ireo hita amin'ny aterineto malalaka, ny fampiasana rindrambaiko misokatra mba hanampiana feo amin'ny lahatsary, ary ny fitantanana ny fizaka-manana amin'ireo tahiry misokatra.
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 10 ora izayAmerika LatinaFotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin'ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany
14 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza
14 ora izayEoropa Afovoany & AtsinananaIndizena Mpiompy Diera, Tezitra Amin'ny Goavan'ny Solika Ao Siberia
Media sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaTeknolojia